ट्रमामा बस दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- घर त जाने
ट्रमामा बस दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- घर त जाने ! तर रोग बल्झियो भने…
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०४, २०७३ समय: ०:३८:३२
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक बिर्तादेउराली कोशीपारिमा साउन ३२ गते भएको बस दुर्घटनाका घाइते अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन मानिरहेका छैनन्। घाइतेको उपचार गरिरहेको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरले सामान्य अवस्थामा आइसकेका बिरामीलाई घरमै आराम गर्नका लागि डिस्चार्ज गर्न खोज्दा उनीहरू घर जान अस्वीकार गरेको खबर छ।
बिर्तादेउराली–८ का घाइते रविन पहरीलाई अस्पतालले घरमै आराम गर्न भनेको छ । तर, उनीले आफूलाई घर जान समस्या भएको बताउँछन्। ‘घर त जाने तर पछि फेरि यही कारणले रोग बल्झियो भने हामी कहाँ जाने? त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्‍यो,’ पहरीले भने, ‘मेरो छाती बेसरी बजारिएको छ, पछि छातीमा समस्या आयो भने कहाँ जाने, घर जाने बाटो त्यही हो, गाडी तिनै हुन्, बिरामी मान्छे कसरी घर पुग्ने, बाँच्न त बाँचियो तर समस्या भयो, हामी सबै अन्योलमा छौँ।’
कात्तिके ज्यामिरे–७ का जयभद्र परियारले पनि दुर्घटनाकै कारण पछि रोग बल्झियो भने कस्ले के गर्ने भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन्। पछि समस्या नआओस् भनेर पूर्णरूपले निको भएर घर फर्किन खोजेको उनले बताए। परियारले भने– ‘छ महिनासम्म आराम गर भनेको छ, छ महिनासम्म कसरी बस्ने, हामी गरिखाने मान्छे हो । ’ पूर्ण निको नभइकन तत्कालै घर जान नसकिने उनको भनाइ छ।
ट्रमा सेन्टरमा हाल १७ जना घाइतेले उपचार गराइरहेका छन्, उनीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। जसमध्ये शुक्रबार तीन जना डिस्चार्ज भएको सेन्टरले जनाएको छ। बाँकी १७ जनामध्ये घाइते माइती गौतम खतरामुक्त भइनसकेको ट्रमा सेन्टरका निमित्त मेडिकल निरीक्षक डा. विनोद शेरचनले जानकारी दिए। गौतमलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको छ।
घाइतेमध्ये नौ जना साधारण अवस्थामा छन् भने येशु लामालाई चिकित्सकको कडा निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। तीन जना घाइतेको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा शुक्रबार केदार गौतमको हिप जोर्नीको अप्रेसन भएको छ। अन्य घाइतेको अवस्था साधारण भइसकेको शेरचनले बताए। उनका अनुसार १५ जनालाई उपचार भइरहेको ट्रमा सेन्टरमा अन्य अस्पतालबाट दुई जना थप घाइते ल्याएर भर्ना गरिएको छ।
बिरामीहरू डिस्चार्ज हुन अस्वीकार गरेको प्रसङ्गमा डा. शेरचनले भने– ‘तीन जना शुक्रबार जानुभयो बाँकीलाई हामीले तपाईंलाई उपयुक्त छ भने जान सक्नुहुन्छ भनेका छौँ । जाने/नजाने उहाँको कुरा हो, हामीले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन।’ पछि रोग बल्झिए के गर्ने भन्ने बिरामीको चासोमा उनले भनेयो– ‘चोटसँग सम्बन्धित भए, दुर्घटनासँग सम्बन्धित रोग छ भने पछि आए पनि उपचार गर्छौं।’
दुर्घटनाका घाइतेलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर, अरनिको यातायातले पनि सबैको उपचार खर्च बेहोर्ने भन्दै ट्रमा सेन्टरमा पत्र दिएको छ। डा. शेरचनका अनुसार अरनिको यातायातले उपचार खर्चवापत हस्पिटलमा एक लाख रुपियाँ धरौटी पनि राखिदिएको छ । अाजकाे गोरखा पत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।